Ny fiakaran'ny marketing ara-tsosialy kendrena tanjona | Martech Zone
Ny fiakaran'ny marketing ara-tsosialy kendrena tanjona
Zoma, Septambra 5, 2014 Douglas Karr
Matetika ianao no hahita ahy amin'ny adihevitra goavana amin'ny Internet amin'ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny politika, fivavahana ary kapitalisma… ny bokotra mena mena rehetra izay sorohin'ny ankamaroan'ny olona. Izany no mahatonga ahy hanana presences manokana sy marika amin'ny alàlan'ny media sosialy. Raha marketing ihany no tadiavinao dia araho ny marika. Raha mila ahy ianao dia araho aho… fa mitandrema… mahazo ahy rehetra ianareo.
Na dia kapitalista tsy mivoaka aza aho dia manana fo lehibe koa. Mino aho fa tokony hifanampy isika fa tsy hiankina amin'ny birao tsy mahomby sy tsy mandaitra. Tena mino aho fa ny fomba fanovantsika zavatra dia amin'ny fandraisana andraikitra manokana sy fanampiana ho mpiorina amin'ny fanovana. Our fahafahana misafidy dia manome fotoana, vola ary loharano hafa foana mba tsy hanampiana ireo fikambanana mpanao asa soa… fa koa mba hanampiana ireo orinasa tsy manam-bola fa manana toky.
Tsy ampy intsony ny fananana a fampahalalam-baovao sosialy. Ny marketing 3.0 dia ho azon'ireo lasa marika ara-tsosialy entin'ny tanjona, ary raha te hanao izany, ny filohan'ny CMO, CSO, CSR, ary ny Foundation dia tokony hampifanaraka hitondrana tantara marimaritra iraisana. Zahao hoe We infographic voalohany etsy ambany miaraka amin'ny zava-misy mangatsiaka mangatsiaka izay manazava ny ho avin'ny tombom-barotra dia tanjona, ary ny marika malaza indrindra amin'ny ho avy dia ireo izay mitondra ny fanovana sosialy misy dikany. Simon Mainwaring
Tsy ny zavatra mety ihany, ny fitarihana tanjona dia lasa fanantenan'ny orinasa ihany koa, ny antony manosika ny mpiasa ary fahazarana mividy mitombo ataon'ireo mpanjifa. Ny olona dia maniry ny volan'izy ireo mankany amin'ny orinasa mahalala ny tontolo iainana, mitandrina tsara ny mpiasany ary mandany fotoana sy hery amin'ny fanaovana izao tontolo izao ho toerana tsara kokoa.
faly aho marketing ara-tanjona nanjary tetika sy lohahevitra ifampiresahana mitombo - Nanoratra teo aloha aho momba ny fahasosorana mahazo ahy rehefa mitsikera ny olona miteraka marketing (nifanakalo hevitra momba izany izahay ALS Ice Bucket Challenge… Ugh). Ampirisihiko ny orinasa rehetra hampiroborobo ny ezaka ataon'izy ireo hanampiana ireo manodidina azy - ity inforgraphic ity dia manondro ny antony!
Tags: antonymiteraka marketingtanjonamarketing entin'ny tanjonamarketing ara-tsosialy entin'ny tanjonatanjona-noroahinaSimon Mainwaringmarika sosialyizahay aloha
Manatsara ny làlan'ny famadihana mitarika mankany amin'ny mpanjifa
Ity lafiny iray amin'ny varotra tokana ity dia mety hahavery $ 4 tapitrisa isan-taona ny orinasanao
5 Septambra 2014 à 1:11
Tena tsara, Douglas. Tena haingana tokoa izany ary tokony ho vonona isika rehetra handray izany. Misaotra!
Sep 6, 2014 amin'ny 1: 21 AM
Tsy mahagaga ahy izany fa ireo endrika tena marina eo amin'ny toe-karena fa eny efa vitanao izany!!!
28 Novambra 2014 à 12:20
Great Post Douglas. Ny isa nomenao ato amin'ity lahatsoratra ity dia tena mampahafantatra. Nahita lahatsoratra mitovitovy amin'izany aho izay miresaka momba ny hoe ny marketing entin'ny tanjona dia mihoatra lavitra noho ny teny filamatra ara-barotra nomerika. http://bit.ly/1yj272u